Ahoana ny fampiasana ny lalàna mifehy ny arbitration any UAE hiarovana ny zonao | Amal Khamis Mpisolovava sy mpanolo-tsaina ara-dalàna
Orinasa lalàna Dubai
Heloka heloka bevava
Injao amin'ny zava-mahadomelina
Fisolokiana - lalàna mifehy ny heloka bevava
Fanamarihana mena INTERPOL
Mampiasa media sosialy ny Interpol
Fitsarana extradition & Intl
Mpisolovava amin'ny fiantohana
Lozam-pifamoivoizana tamin'ny moto
Loza ho an'ny sambo
Ahoana ny fampiasana ny lalàna mifehy ny arbitration any UAE hiarovana ny zonao?
Lalàna arbitration federaly any UAE
mpisolovava arbitration ao UAE
Nilaza izy ireo fa efa an-jato taonany no nampiasaina ny fitsaratsaram-pahefana, miaraka amin'ny sasantsasany amin'ireo asa soratr'i Platon izay mbola velona mandraka ankehitriny. Any Moyen-Orient ankehitriny, ny mpahay tantara dia manadihady ny fampiharana ny arbitration hatramin'ny andron'ny Silamo taloha. Ny timestamp iray hafa izay mbola miverina lavitra dia manondro ny fampiasan'ny mpanjaka malaza an'i Solomon.
Fantatsika tsara fa ny "Arbitration" maoderina dia namboarina ho fomba hafa hamahana ny fifanolanana rehefa namoaka ny lalàna ny Parlemanta Britanika tamin'ny 1697. Ary ny firaketana voalohany indrindra an'io teny io dia avy amin'i Shakespeare, ao amin'ny "Troilus" hatrizay 1602. Na dia tsy niova aza ny teny dia hita fa ny tanjona ijoroany ary ny zavatra tazominy dia mivoatra.
Ny fahaizan'ny Arbitration ho fomba voalohany hamahana ny fifanolanana sarotra, ara-barotra ary eo amin'ny sehatra iraisampirenena dia tsy mahagaga - mijoro ho toy ny fanandramana voasedra amin'ny fitsarana izy io. Ny arbitration dia fomba famahana fifanolanana malaza ho an'ny orinasa any amin'ny toeran-kaleha ara-barotra toa an'i UAE. Ny aleony dia satria manome tombony maro noho ny raharaham-pitsarana nentim-paharazana noho ny hafainganam-pandehany, tsiambaratelo ary malefaka.
Raha misy zavatra hafa hita koa, tsy ny fifanolanana ara-barotra ihany no vokatry ny fandaminana ara-barotra. Ny fanitsakitsahana zon'olombelona dia mahazatra ihany koa. Mampalahelo fa ny fampiharana ny zon'olombelona amin'ny fanararaotana ataon'ireo orinasa amin'ny alàlan'ny fanenjehana nentim-paharazana dia dingana iray feno. Soa ihany fa toa miova izany, noho ny fivoarana vaovao amin'ny arbitration.
Arbitration sy "Zo?"
Raha ny mahazatra, mba hiarovana ny zon'olombelona anao dia tsy maintsy mankany amin'ny fitsarana ianao. Araka ny fantatsika rehetra, ity dia dingana miadana sy mandany fotoana. Soa ihany, azonao atao ny mampihatra ny zonao amin'ny alàlan'ny fitsaratsaram-poana nefa tsy mila miditra ao anatin'ny rindrin'ny fitsarana efatra.
Mba hahatakarana ny fomba azo atao, tsara kokoa ny manomboka amin'ny fisian'ny Arbitration momba ny asa aman-draharaha sy ny zon'olombelona amin'ny taona 2013. Nanapa-kevitra ny Fitsarana Tampony Amerikanina fa ny Statut Alien Tort US an'ny 1789 dia tsy mihatra ivelan'i Etazonia. Ny fanapahan-kevitra dia nolavina tokoa ireo iharan'ny fanitsakitsahana zon'olombelona ataon'ny orinasa fidirana amin'ny tribonaly amerikana hahazoana fanonerana noho ny fanitsakitsahana zon'olombelona.
Noho io toerana io dia niditra tamin'ny sehatra mahazatra fa ny arbitration dia mety ho fomba hafa amin'ny famahana ny fifanolanana ho an'ireo orinasa sy tompona zon'olombelona mba handaminana ny fifanolanana. Ny fitarihana ity sisintany vaovao ity dia ny Fitsipika Hague momba ny fifampiraharahana momba ny zon'olombelona sy ny zon'olombelona (BHA) ("The rules on Human rights Arbitration"), natomboka tamin'ny 20th Desambra, 2020.
Ny lalàna dia “manome andiam-pahefana handaminana ny fifanolanana mifandraika amin'ny fiantraikan'ny asa aman-draharaha amin'ny zon'olombelona.” Io dia ahafahan'ny fanjakana, orinasa, ary olona tsirairay handamina ny fifanolanana amin'ireo orinasa sy mpiara-miasa eo alohan'ny tribonaly arbitrale iraisam-pirenena.
Ny Landscape Arbitration any UAE.
Ny UAE dia mandray andraikitra iraisam-pirenena raha ny amin'ny arbitration no resahina. Nandritra izay 5 taona lasa izay, ny UAE dia nandray ny sehatra afovoany ho toeran'ny arbitrations misy ifandraisany amin'ireo orinasam-pandraharahana sy ara-barotra monina any Eropa Atsinanana, Afrika ary Azia.
Hitanay ny fisian'ny andrim-panjakana manerantany miaraka amin'ny lalàna maoderina mifototra amin'ny fanao iraisam-pirenena tsara indrindra. Noho ny lalàna Arbitration misy fenitra volamena (lalàna federaly lah. 6/2018) sy ny toeran'ny antoko any New York sy ny fivoriambem-paritra hafa, ny UAE dia mampiasa ny fahafahany mitantana ny arbitrations iraisam-pirenena momba ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona.
Ny fametrahana ny lalàna Arbitration Federal tamin'ny taona 2018 dia nanitsy ny Arbitrations tany UAE, nampiditra betsaka ny maodely UNCITRAL. Misaotra ny lalàna, ny Arbitration any UAE dia avela tokoa satria manome fihoarana sy fahalalahana bebe kokoa amin'ny antoko hamaritana ny fizotran'ny fitsarana.
Ankoatr'izay dia mametraka ny fahefan'ny Arbitrators hanome fepetra vonjimaika ihany koa izy ary hanao baiko mialoha. Tena zava-dehibe izany rehefa manandrana mamaha tranga misy fanitsakitsahana ny zon'olombelona.
Fiarovana ny zonao amin'ny lalànan'ny Arbitration UAE
Ny vokatry ny asa aman-draharaha amin'ny zon'olombelona dia miseho amin'ny fomba maro ary voarakitra an-tsoratra tsara. Ohatra, ny hetsiky ny orinasa iray sy ny mpifanaraka aminy dia mety hisy fiatraikany mivantana amin'ny toe-piainan'ny tontolo iainana ary hampidi-doza ny vondrom-piarahamonina iray manontolo.
Indraindray, ireo fiantraikany ireo dia tsy mivantana ihany koa, mipoitra avy amin'ny fihetsiky ny mpamatsy sy ny mpiara-miombon'antoka amin'ny sehatry ny famatsian-dry zareo. Amin'ny ankapobeny, ireo orinasa amin'ny alalan'ireto manaraka ireto:
Fandotoana ny tontolo iainana sy lozam-pifamoivoizana ary tsy fahombiazan'ny fahasalamana sy fiarovana izay manimba ny fahasalaman'ny olona,
Miasa amin'ny fepetra tsy azo antoka na tsy salama,
Fanerena an-tery na fampiasana ankizy, ary ny karaman'ny mpiasa ambany karama;
Ny fanesorana an-tsitrapo ny vondrom-piarahamonina,
Ny fametrahana hery be loatra amin'ireo mpiasa ataon'ny mpiambina miaro ny fananany;
Fanavakavahana ny mpiasa, ohatra, amin'ny firazanana, miralenta na firaisana ara-nofo;
Ny fihenan'ny rano na ny fandotoana ny loharano izay iankinan'ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana.
Ohatra fotsiny ireo, ary ny isan'ireo olana izay mety miteraka raharaham-barotra momba ny zon'olombelona dia mijanona ho midadasika tokoa.
Amin'ny ankapobeny, ny fampiasana ny arbitration hamahana ny fifanolanana dia azo atao raha tsy manaiky ny arbitration ireo antoko voarohirohy. Noho izany, amin'ny fifanolanana misy eo amin'ny orinasa sy ny mpamatsy azy, ny fifanarahana arbitration dia ampidirina ao anatin'ny fifanarahana famatsiana.
Raha tsy vokatry ny fanitsakitsahana ny fifanarahana ny olana, dia ny fifampiraharahana ihany no resahin'ireo antoko amin'ny alàlan'ny fifanarahana fandefasana.
Noho izany, ho an'ny olana momba ny zon'olombelona mifandraika amin'ny asa aman-draharaha, dia manaraka izany fa ny fomba fametrahana fanekena dia amin'ny alàlan'ny fampidirana ny fehezan-dalàna arak'asa amin'ny fifanarahana iraisana momba ny fiarovana ny zon'olombelona.
Io no be mpampiasa ankehitriny. Ohatra iray amin'izany ny Accord on Fire and Building safety any Bangladesh.
Nosoniavina taorian'ny fianjeran'ny tranobe Rana Plaza ny 24 aprily 2013 (izay nahafaty mpiasa maratra an'arivony maro), ny fifanarahana dia noforonina mba hametrahana programa fiarovana sy fiarovana trano ho an'ny mpiasa amin'ny indostrian'ny lamba any Bangladesh. Ny mpana sonia ny Accord dia misy marika, mpanafatra ary mpivarotra 200 mahery eran-tany amin'ny firenena 20 manerana ny kaontinanta 4.
Tsy mazava raha afaka manomboka mivantana ny arbitration ny olona tsirairay. Ohatra, ny antoko mankany amin'ny Bangladeshi Accord ary mety ho olon-kafa toa azy ireo dia sendika sy orinasa. Vokatr'izany, ny mpiasa dia tsy afaka manomboka mivantana arbitration eo ambaniny. Nametraka fitarainana momba ny fahasalamana sy ny fiarovana kosa izy ireo tamin'ny alàlan'ny dingana napetraka tao anatin'ny fifanarahana.
Ny mahaliana dia ny arbitrations roa ho an'ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona dia nanjary hita eo ambanin'ny fifanarahana hatreto. Nandritra ny fotoana roa, ny antoko dia nampiasaina tamin'ny fametrahana, ary ny tribonaly tao amin'ny arbitrations roa dia namoaka baiko famaranana.
Mpisolovava Arbitration efa za-draharaha ao UAE
Ny fanavaozana nentin'ny lalànan'ny Arbitration an'ny UAE 2018 dia manome fahazavana bebe kokoa sy fahatokisana ho an'ny Arbitration Business sy ny zon'olombelona. Ny fanitsiana dia mamorona toerana ho an'ny fahalalahana bebe kokoa amin'ny fomba fitantanana arbitrations amin'ny ankapobeny.
Amal Khamis Advocates dia manampahaizana manokana amin'ny famolavolana ny fifanarahana arbitration ara-barotra sy amin'ny fampiasam-bola, ary koa ny fisolo tena ny mpanjifa amin'ny fizotran'ny fitsarana iraisam-pirenena. Ireo mpisolovava zahay efa za-draharaha dia ny tetezanao amin'ny fiarovana ny zonao na ny fiarovana ny vahaolana amin'ny fandikan-dalàna rehetra. Ny fahaizantsika manokana amin'ny famahana ny fifanolanana dia ahafahanay manararaotra tsara ny lalàna rehefa manampy amin'ny fitondrana ny arbitration-nao.
Raha mila mamaha ny fifandirana ao UAE ianao, mety hisy ny fizotranao. Io rahateo no vato fehizoron'ny lalàna UAE. Amin'ny arbitration, antoko fahatelo tsy miandany no hitsara sy hamaha ny fifanolanana. Mamaha ny olana ara-dalàna sarotra sy miampita sisintany manerana ny faritra fanazaran-tena maro izahay. Ny kolontsainay tsy manam-paharoa dia ahafahantsika mahatakatra ny tsena eo an-toerana sy hitety faritra maro. Izahay dia iray amin'ireo orinasan-dalàna arbitration tsara indrindra any UAE. Mifandraisa aminay anio!
Paositry ny polisy
Fitsaram-pianakaviana ao Dubai
Fifandraisan'ny maika any UAE
Business Bay, Dubai, Emira Arabo Mitambatra
Copyright © 2022 Law Firms Dubai | Powered by Copper Communications
English العربية Français Русский Español हिन्दी Afrikaans Shqip አማርኛ Հայերեն Azərbaycan dili Euskara Беларуская мова বাংলা Bosanski Български Català Cebuano Chichewa 简体中文 繁體中文 Corsu Hrvatski Čeština‎ Dansk Nederlands Esperanto Eesti Filipino Suomi Frysk Galego ქართული Deutsch Ελληνικά ગુજરાતી Kreyol ayisyen Harshen Hausa Ōlelo Hawaiʻi עִבְרִית Hmong Magyar Igbo Bahasa Indonesia Gaelige Italiano 日本語 Basa Jawa ಕನ್ನಡ Қазақ тілі ភាសាខ្មែរ 한국어 كوردی‎ Кыргызча ພາສາລາວ Latin Latviešu valoda Lietuvių kalba Lëtzebuergesch Македонски јазик Malagasy Bahasa Melayu മലയാളം Maltese Te Reo Māori मराठी Монгол ဗမာစာ नेपाली Norsk bokmål پښتو فارسی Polski Português ਪੰਜਾਬੀ Română Samoan Gàidhlig Српски језик Sesotho Shona سنڌي සිංහල Slovenčina Slovenščina Afsoomaali Basa Sunda Kiswahili Svenska Тоҷикӣ தமிழ் తెలుగు ไทย Türkçe Українська اردو O‘zbekcha Tiếng Việt Cymraeg isiXhosa יידיש Yorùbá Zulu